Urur xag jir ah oo boggiisa ku daabacay dad xukun ku dhacay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shakhsi jilbaha ku haysta kombiyuuter. sawir: Izabelle Nordfjell/TT
Urur xag jir ah oo boggiisa ku daabacay dad xukun ku dhacay
"Waa falkii ugu ballaarnaa ee dhiggiisa"
La cusbooneeyay måndag 4 december 2017 kl 15.57
La daabacay måndag 4 december 2017 kl 13.58
Bog uu leeyahay urur xag-jir dhanka midig ah ayaa ku daabacay xogta 83 656 ruux oo ey ku dhaceen xukunno kala duwan. Iyada oo iminka dacwad ka dhan ah ee la xiriirta xeerka xogta shakhsiga (PUL) loo gudbiyey ciidanka ammaanka.
Shaashaddan oo ah mid bilaash ah ayaa aasaasnayd wixii laga soo bilaabo jimcadii dorraad iyadoona lagu baari karay 140 000 e xukunno dembi ee dhacey intii u dhexeeysay sannadihii 2004-2014, sida uu qoray ururka Juridikfronten oo isagu ka dambeeyay dacwadda laga gudbiyay ururka xag-jirka.
Robin Enander, af-hayeenka ururka Juridikfronten ayaa sheegay in falkani yahay mid dhiggiisa aan horay loo arag:
–Waa fal-dambiyeedkii ugu ballaarnaa ee la xiriira meel ka dhac lagu sameeyey xeerka xogta shakhsiga (PUL) ee taariikhda Sweden, middaasina oo macnaheedu tahay in ciidanka ammaanku qiimeeyn ballaaran siiyo dacwaddan, sida uu sheegay Robin Enander.
Shaashadda ayaa laga daalacan karaa magaca qofka, lambarka diiwaan-gelinta xukunka, xilliga xukunka iyo qowmiyadda uu qofku u dhashay iswiidhish iyo inaanu iswiidhish ahayn.